Fanelezana vaovao tsy marina :: Tambazana dimy tapitrisa ariary ny fikarohana vehivavy iray • AoRaha
Niparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”, nandritra ny telo andro izay, ny horonam-peo misy feombehivavy iray milaza vaovao tsy marina momba ny resaka “Coronavirus”. Namoaka filazana fikarohana an’io vehivavy io, miaraka amin’ny fampanantenana fanomezana valisoa mitentina dimy tapitrisa ariary, ho an’izay manam-baovao na mahafantatra azy, ny fitondram-pajakana. Fantatra fa efa olona telo no nampidirana am-ponja noho ny filazana vaovao tsy marina momba ny «Coronavirus» teto amintsika.
Re tao amin’ny horonampeo niparitaka fa: “efa tamin’ ny fiatombohan’ny volana marsa no nisy olona maro voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina mahavoa ny «Coronavirus» teto Madagasikara saingy nafenin’ny fanjakana. Iharan’ny fandrahonana ny mpanao gazety”. Namoaka tarehimarika maromaro hatramin’ny fahafatesana olona mihitsy ilay vehivav y, ao anatin’ny horonam-peony.
“Tsy mbola tratra ilay nanaparitaka vaovao tsy marina. Aoka hanatona ny polisy ao amin’ny sampan-draharaha “Cybercriminalité” na hiantso ny laharana 034 05 703 76 sy ny polisy misahana ny heloka bevava amin’ny laharana 0340570376 izay rehetra manam-baovao momba azy”, hoy ny fanampimpanazavana avy amin’ny Polisim-pirenena, omaly.
Matetitetika mihitsy ny fanaparitahana tsaho momba ny aretina “Coronavirus”. Efa nisy ireo voasambotra sy naiditra am-ponja vonjimaika. Samy misahana ny fanadihadiana sy ny fikarohana momba izao fanelezana vaovao tsy marina izao ny eo anivon’ny Zandariamaria sy ny Polisim-pirenena.
Olona telo, ohatra, no tratehaky ny polisy sady nalefa any am-ponja vonjimaika. Nisy ireo nalaina tany amin’ ny faritra ivelan’Antananarivo sy ny voasambotra teto andrenivohitra.
Fitokonana tany Toamasina :: Naparitaka tamin’ny baomba mandatsadranomaso ireo mpitarika posy
Fisamborana olon-dratsy :: Andiana mpamaky trano tratra niaraka tamin’ny basy